चौथो व्यक्ति? पाँचौं व्यक्ति? व्याकरण व्यक्ति र मार्केटिंग | Martech Zone
यो सटीक तुलना नहुन सक्छ, तर म आज वेबमा आधारित मार्केटिंगको बारेमा सोचिरहेको थिएँ र एउटा विचारको साथ आएँ। मैले प्राय: वेबसाइटको साथ कमजोरीहरूको बारेमा कुरा गरेको छु जुन केवल 'यार्ड संकेतहरू' हुन्। म पढ्दैछु नग्न कुराकानी: कसरी ब्लगहरु बजारमा परिवर्तन गरीरहेको छ ग्राहकहरु संग कुराकानी र यो उही मुद्दामा बोल्दछ। मैले फेला पारेँ कि म अर्को मान्छे जस्तै दोषी छु - धेरै साइटहरू बनाएको जसले धेरै कुराकानीको लागि अनुमति दिदैन। मैले भर्खरै 'राईको क्याचर' पढ्न सकें। सलिinger्गरले प्रयोग गर्ने शैली मनोरञ्जनात्मक छ किनकि यो यति कुराकानीको छ।
जब हामी हेर्छौं व्याकरणात्मक व्यक्ति, लेखकहरू म, हामी, तपाईं वा उनीहरू बारे लेख्न सक्दछौं। यसलाई क्रमश: "पहिलो", "दोस्रो" र "तेस्रो" व्यक्ति भनेर चिनिन्छ। मेरो अनुमान छ कि मार्केटिंग धेरै फरक छैन। प्राय: हामी वेब साइटहरू मार्फत आउँदछौं जुन पहिले, दोस्रो, वा तेस्रो व्यक्तिको दृष्टिकोणमा लेखिएको थियो। तर, किताब पढ्ने जस्ता त्यस्ता दृष्टिकोणहरू सीमित छन्। यो लेखक तपाईसँग कुरा गर्दैछ पाठक। तपाईलाई प्रश्न सोध्ने वा प्रतिक्रिया दिन कुनै अवसर छैन।
डिजिटल र डाटाबेस मार्केटिंगको लागि अवसर यो हो कि उनीहरूमा लाग्ने "चौथो" वा "पाँचौं" व्यक्ति हो। त्यो हो, चौथो व्यक्तिले पाठकलाई लेखकसँग अन्तर्क्रिया गर्न अनुमति दिइरहेको हुन सक्छ। यो ब्लगमा टिप्पणीहरू हुनसक्दछ, वा यो वेब-आधारित फोरमहरू, बलियो आन्तरिक खोजी, प्रतिक्रिया फारमहरू, आदि हुनसक्दछ। यसले दुई-मार्ग संचारलाई अनुमति दिन्छ, धेरै धनी अनुभव।
"पाँचौं व्यक्ति" ले यसलाई अर्को कदम लिन्छ। के पाठकहरु लाई अन्य पाठकहरु संग कुरा गर्न अनुमति दिने बारे के हुन्छ यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइट मार्फत आफ्नो ग्राहकहरु लाई ब्लग गर्न को लागी अनुमति दिनुहुन्छ? जोखिमपूर्ण? निश्चित, यदि तपाईंले उनीहरूको कुरा सुन्नुहुन्न। जब तपाइँ तपाइँका ग्राहकहरुबाट प्रतिक्रिया माग्दैन र त्यस प्रतिक्रियाको आधारमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तपाईलाई चिन्ता लिनु पर्दैन प्रतिक्रिया र ग्राहक लामो समय सम्म रहनेछैन!
म संगठनहरूलाई चुनौती दिन्छु कि उनीहरूको मार्केटिंग प्रयासहरूले काम गरे सबै माथिको:
आफ्नो बारेमा कुरा गर्नुहोस्। (हामी)
तपाईंको सम्भावनाहरूसँग कुरा गर्नुहोस्। (तपाईं)
तपाईंको ग्राहकहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस् (तिनीहरू)
तपाइँको ग्राहकहरु तपाइँ संग कुरा गर्न को लागी अनुमति दिनुहोस् (हे)
तपाईका ग्राहक / सम्भावितहरुलाई एक अर्का (म) सँग कुरा गर्न अनुमति दिनुहोस्।
टिप्पणीहरू स्वागत छ।
मानिसहरूमा लगानी गर्नुहोस्। तपाईं निराश हुनुहुने छैन।